Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K၊ ယူရို ၁၀၀၀ ကျော်ဖြင့်ရုပ်ရှင်ရုံကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း Gadget သတင်း
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K၊ ရုပ်ရှင်ရုံကိုယူရို ၁၀၀၀ ကျော်ဖြင့်သာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်
Ruben Gallardo | | ကင်မရာ
အမှန်တရားကတော့ရုပ်ရှင်ရုံမှာပြသမယ့်ရလဒ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တဲ့ဗွီဒီယိုကင်မရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စျေးနှုန်းတွေတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာတယ်။ သို့သော် BlackMagic Design မှရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များစွာသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကလစ်ပ်များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုမည့်မော်ဒယ်သစ်တစ်ခုစတင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အဲဒါအကြောင်းပါ BlackMagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K.
ဒီဗွီဒီယိုကင်မရာသည်အမြင့်ဆုံး resolution - 4K - ဖြင့်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုပေးပြီးရလဒ်ကိုရိုက်ကူး။ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမရှိပဲအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ RAW format နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဓာတ်ပုံနဲ့အတူတူပဲ။ ထို့ကြောင့်, တစ်ခုချင်းစီကိုဘောင်အများဆုံးအထိညှစ်ခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမဆုံးရှုံးနိုင်ပါဒါကဒါရိုက်တာအတွက်အများဆုံးပဲ။ သို့သော်၎င်းသည် BlackMagic Pocket Cinema Camera 4K နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်မဟုတ်သော်လည်း၎င်း၏စျေးနှုန်းမှာယူရို ၁၀၀၀ ကျော်မျှသာရှိသည်။
1 SDD disk များချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း
3 ရောင်းချစျေးနှုန်းတွင်ပူးတွဲပါပရော်ဖက်ရှင်နယ် software ကို
SDD disk များချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း
စပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်မည့်ရက်အတိအကျကိုမသိရသေးသော်လည်း၎င်း၏လွှတ်တင်မှုကိုယခုနှစ်ကုန်တွင်စီစဉ်ထားသည်။ အခုငွေပမာဏအတွက် ဒါအတွက်ပေးဆောင်ငွေ 1.145 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်၎င်း၏တရားဝင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့။ ဒါကရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာယူရို ၁၀၀၀ နဲ့ပြသနိုင်ဖို့အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ကင်မရာပါ။
ဒါ့အပြင်ဒီ BlackMagic Pocket Cinema Camera 4K မှာလည်းတစ်ခုပါရှိပါတယ် မိုက်ခရို 4/3 အာရုံခံကိရိယာထို့ကြောင့်စျေးကွက်မှရွေးချယ်နိုင်သောမှန်ဘီလူးအမြောက်အများကိုသင်ပေးနိုင်သည်။ သင်တိုင်ပင်နိုင်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Canon, Nikon, Pentax, Leica နှင့် Panavision ။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာများကိုစိတ် ၀ င်စားသည်။ သင်ကမြန်နှုန်းမြင့် SD format နှင့် Compact Flash ကဒ်များရှိမှတ်ဉာဏ်ကဒ်များမှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီဟာမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်ကင်မရာလည်းပါမယ် SSD disk များကဲ့သို့သော USB-C port မှတဆင့်ပြင်ပသိုလှောင်မှု element များကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, BlackMagic Pocket Cinema Camera 4K အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီကိုသုံးနိုင်သည်။ OR လက်ရှိချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့အသံသွင်းနေတုန်းကြောက်စရာမလိုဘူး။ အသံနှင့် ပတ်သက်၍၊ ဒီကင်မရာတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက် ၃.၅ မီလီမီတာထည့်သွင်းမှုနှင့် miniXL ထည့်သွင်းမှုများရှိသော်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံဖမ်းမှုကိုသေချာစေသည့်စနစ်နှစ်မျိုးပါသည့်မိုက်ခရိုဖုန်းများပါ ၀ င်သည်။
ဤအတောအတွင်း၎င်း၏နောက်ကင်မရာကြီးမားသည်။ ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှအပြည့်အ ၀ မြင်နိုင်တာဟာဒီကင်မရာအမျိုးအစားအတွက်အလွန်အရေးကြီးတယ်။ ပြီးတော့မင်းကို ၅ လက်မထောင့်ဖြတ် Multi-touch screen; သင်တစ် ဦး ထားလျှင်အဖြစ်ဖြစ်ပါသည် စမတ်ဖုန်း ၎င်း၏နောက်ဘက်မှာ။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Full HD resolution ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းတရားဝင်ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသည့်ပုံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းအသင်း၏အရွယ်အစားသည်အလွန်ကြီးမားပုံမပေါ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သမားရိုးကျ SLR ကင်မရာထက်ပိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာမှထူးထူးခြားခြားတော့အဲဒါကသင့်ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
မှတ်တမ်းတင်ထားသောအရည်အသွေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်သင်ရောက်ရှိနိုင်သည် 4K resolution ဖြင့်ရရှိနိုင်သောနှုန်းသည် 60 fps အထိရှိသည်။ ဗီဒီယိုများကို HD နှင့် Full HD တွင်လည်းကူးယူနိုင်သည်။ 120 fps နှုန်းဖြင့်အဆုံးစွန်သောအမှု၌။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ BlackMagic Design မှညွှန်ပြသည့်အတိုင်း၊ သာမန် SD ကဒ်ဖြင့် HD အရည်အသွေးရှိဗီဒီယိုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်မှာလုံလောက်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြား resolution ကိုလိုချင်လျှင်မြန်နှုန်းမြင့် SD ကဒ်များသို့မဟုတ် SSD disk များပေါ်တွင်ပင်လောင်းသင့်သည်။
ရောင်းချစျေးနှုန်းတွင်ပူးတွဲပါပရော်ဖက်ရှင်နယ် software ကို
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အတွင်း 1.145 ယူရို၏စျေးနှုန်း ဒီ BlackMagic Pocket Cinema Camera 4K မှာလိုင်စင်အပြည့်အစုံလည်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ် ဆော့ဖျဝဲ DaVinci Resolve စတူဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်း။ ဤ ဆော့ဖျဝဲ မင်းရဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုလုံးကို Post-production လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။
သင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုရုပ်ရှင်ရုံထဲကိုသရုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်တော့ BlackMagic Design မှာစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီ - BlackMagic Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ၎င်း၏အမည်အရ 4K resolution မရှိခြင်း၊ ၎င်းသည် Full HD နှင့် ၈၈၀ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ကင်မရာ » Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K၊ ရုပ်ရှင်ရုံကိုယူရို ၁၀၀၀ ကျော်ဖြင့်သာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်
Dodocool DA158၊ ဤဆူညံသံပယ်ဖျက်နိုင်သောနားကြပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါသည်